Kooxo hubeysan ayaa weeraray labo masjid oo ku yaala wadanka Newzealand, halkaas oo ay ku dileen dad aad u farabadan oo Muslimiin ah. Weerarka oo loo adeegsaday rasaas nool nool ayaa gallaaftay nolosha ugu yaraan 40 ruux oo muslimiin ah, kuwaas oo xilliga la beegsanayay ku tukanayay masaajidda lagu weeraray. Masjidka Al-Nuur ee la weeraray ayaa ah masjidka ugu daran ...	Read More »
Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa amaanay Yuweri Museveni, xilli dhawaan uu aflagaadeeyay shacabka Soomaaliyeed. Isagoo kulan kaga qeybgalaya magaalada Kampla ee caasimadda wadanka Uganda ayuu madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Farmaajo wuxuu amaan kala dul dhacay baaderi Yuweri Museveni oo ah madaxweynaha wadankaas. Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa magaalada Kampla kaga qeybgalay shir loogu magacdaray Africa Now, kaas oo ay soo ...	Read More »
Maraykanka oo duqeyn diyaaradeed ku dilay Askar katirsan Xukuumadda Kaabul.
War kasoo baxay wasaaradda Gaashandhiga ee xukuumadda taagta daran ee Kaabul ayaa lagu sheegay in diyaaradaha Maraykanka ay duqeyn ku dileen ciidamo katirsan kuwa Afqaanistaaniyiinta. Duqeynta ay geysteen diyaaradaha Maraykanka ayaa ka dhacday gobolka Uruzkaan ee dhaca koonfurta wadanka Afqaanistaan, waxaana ciidamada la beegsaday ay ku sugnaayeen bar kontorool oo ay dadka ku baaraan. Wasaaradda difaaca ee xukuumadda Kaabul ayaa ...	Read More »
Qaar kamid ah warbaahinta Aduunka ayaa baahiyay in sarkaal Maraykan ah uu kamid ahaa dadkii ku dhintay burburkii diyaaradda Itoobiya, taas oo horaantii todobaadkan kusoo dhacday meel u dhow magaalada caasimadda ah ee Adis Ababa. Antony Luweis oo kamid ahaa Saraakiisha ciidamada Maraykanka ayaa kamid ahaa 8 ruux oo dowladda Maraykanka uga dhintay burburka diyaaradda Itoobiya Airline, waxaana ninkan geeridiisa ...	Read More »
Wadanka Britin oo ay ku noolyihiin jaaliyado badan oo muslimiin ah, waxaa mudooyinkii dambe soo kordhayay dhibaatooyin iyo tacadiyaad joogta ah oo lagula kacayo dadka muslimiinta. Dhibaatooyinkan waxaa ku kacaya ciidamada Police-ka wadanka iyo kooxo Gangestirro ah oo hubeysan, kuwaas oo qaabab dhagreysan u beegsanaya muslimiinta gaar ahaan kuwooda nugul sida dumarka iyo caruurta. Muuqaal dhawaan ku baahay baraha bulshada ...	Read More »
Butafaliqa oo ka tanaasuley Musharaxinimada Doorashooyinka Aljeeriya.
Bayaan kasoo baxay madaxtooyada Aljeeriya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha wadankaas Cabdil-caziiz Butafaliqa uu ka tanaasuley musharaxnimada markii shanaad uu ku doonayay inuu ku qabto talada wadanka Aljeeriya. Bayaanka waxaa lagu sheegay in Butafaliqa uu qaatay rabitaanka shacabka, islamarkaana uu ka haray musharaxnimada. Hadaba warar faafaahsan oo arimahan la xiriira ka dhagayso qeybta hoose. Halkan ka dhagayso Wararka ku saabsan ...	Read More »
Dhuuxa Wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, sabtida mooyaane, waxaana lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah Halkaan Ka Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada 11 03 2019 Read More »
Saacadba saacadda xigta waxaa la helayaa macluumaad muhiim ah oo ku aadan waxay ahaayeen badi dadkii ku dhintay burburkii diyaaradda Itoobiya ee maalintii shalay kusoo dhacday meel u dhow magaalada Adis Ababa. War kasoo baxay Midowga Africa ayaa lagu xaqiijiyay in sarkaalad weyn oo katirsan ururka ay kamid ahayd dadkii ku geeriyooday burbrkii diyaaradda Boeng 737, taas oo ay ku ...	Read More »
Ciidamada Maraykanka oo ay wehlinayaan askar katirsan xukuumadda Kaabul ayaa weerar habeen guureyn ah ku qaaday deegaanno katirsan gobolka Meydaan-wardak ee Afqaanistaan, halkaas oo ay ku dileen dad shacab ah. Weerarkan oo dhacay habeenkii xalay waxay ciidamada Maraykanka iyo kuwa xukuumadda Kaabul ku qaadeen deegaan lagu magacaabo Sayed Abaad oo dhaca bartamaha Meydan-wardak. Ugu yaraan 9 ruux oo shacab ah, ...	Read More »
UN-ka: Shaqaale badan ayaa nooga dhintay burburkii diyaaradda Itoobiya.
Waxaa soo baxaya xogo muhiim ah oo laga helayo qaar kamid ah dadkii ku dhintay burburkii diyaaradda Itoobiya ee maalintii shalay, waxaana tiro badan oo kamid ah dadkaas ay ahaayeen xubno muhiim u ah Qaramada Midoobay. War saxaafadeed kasoo baxay xafiiska guud ee Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in 19 kamid ah dadkii ku dhintay burburka diyaaradda Ethiopian Airline ay ...	Read More »